Uthando lokubaleka njengesibini: iingcebiso kunye neendawo | Amadoda aQinisekileyo
Ngokuqinisekileyo uya kuthi ngamanye amaxesha ucwangcise kunye neqabane lakho ukuya kwi uthando lokubaleka. Ngamanye amaxesha siyilungiselela le ndlela yokubaleka kwaye sicinga ukuba yonke into kufuneka igqibelele. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo izinto ezithile ezibalulekileyo xa ucwangcisa ukubaleka nokuba kunye neqabane lakho okanye uhamba nomhlobo wakho. Kuya kufuneka unomdla, umlingo, ukuthanda, uyilo kunye nobunzima. Ke ngoko, kubalulekile ukuthathela ingqalelo ezinye zezinto eziza kwenza esi sicwangciso singalibaleki.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba ucwangcise njani ukubaleka kwezothando, kodwa siyacacisa apha.
1 Khetha indawo entle
2 Ukumangaliswa kokubaleka kwezothando
3 Uthando lokubaleka kwezithandani
4 Iindawo zokutyelela
Khetha indawo entle
Xa ucwangcisa ukubaleka kwezothando, imeko apho siza kuyiphumeza khona yeyona nto iphambili. Kuya kufuneka ukhethe indawo ekuvumela ukuba ube nemfihlo enkulu kwaye uceba ukukholisa nobabini. Nangona into ebalulekileyo yokubaleka iyinkampani elungileyo, kubalulekile ukuthatha isigqibo kuseto apho uziva njengabaphikisi bokwenyani ngamaxesha onke.
Ezinye zeendawo ezicetywayo ngabantu abaninzi zezo ndawo apho unokukhululeka khona njengoko kuphakathi kwindalo ukugxila komnye nomnye. Eyona nto ilungileyo yile Musa ukuba neziphazamiso ezininzi kakhulu ezenza ukuba ungachithi ixesha kunye neqabane lakho kwaye ujolise kuye. Ngumbono olungileyo ukonwabela uxolo, ukusondelelana kunye nokubaleka ngokupheleleyo kwisiqhelo nakwiingxaki zemihla ngemihla kunye. Le yindlela enikwazi ngayo ukukhupha umthwalo omnye komnye kwiingxaki zemihla ngemihla. Indawo kufuneka ibe yinto eyenza sithule kwaye sizive sisondele.
Indawo yendalo inokuba ngumbono omkhulu, idolophu enabemi abambalwa kunye nendawo yasemaphandleni.
Ukumangaliswa kokubaleka kwezothando
Enye yezinto eziphambili ekufuneka uzikhathalele kukuba yinto eyothusayo. Ukuba sisicwangciso sempelaveki njengesibini, eyona nto intle kukuba omnye umntu akayilindelanga. Ukulungiselela le nto, kubalulekile ukuqinisekisa umhla ochanekileyo kwaye wazi ukuba omnye umntu akazukuwenza naziphi na izicwangciso kwaye, kwangaxeshanye, angarhaneli nto.
Nje ukuba ubaleke kwezothando, ungalinda umzuzu omangalisayo wokulungiselela isipho esikhethekileyo. Esi sipho siya kufihlwa ngekamva lethu kwaye siya kulinda de kube ngumzuzu olungileyo wokuzala. Kwesi sipho okanye ungadibanisa ezinye iifoto eninazo kunye ukuze niziphathe ngakumbi. Unokongeza ileta otshintshiselane ngayo kwaye ucinga ukuba izipho ezenziwe ngesandla zihlala zinento exabiseke ngakumbi. Ayifani kangako nokuthenga into efunwa ngomnye umntu, kodwa yinto ozenzele yona ixesha elithile. Nalapha ubuchule kunye nokuqala kuxatyiswa kakhulu.
Okokugqibela, unokuba nesidlo sangokuhlwa sothando phantsi kwesibane esikhanyayo sokuzisa ukufudumala okungakumbi entlanganisweni. Le nkcukacha kwaye iya kuphawula umahluko kuko konke ukwahluka onako kwesi sibini.
Uthando lokubaleka kwezithandani
Enye into ebalulekileyo yokubaleka kwezothando kukuba kufuneka ibe yinto ephumayo. Kuya kufuneka unqamle usuku oluxakekileyo ukuya kwimini kwaye kuya kufuneka ujolise komnye nomnye. Ungazinika umyalezo oza kukunceda ususe uxinzelelo, uphumle kwaye unciphise uxinzelelo lomzimba. Ukongeza, unokunyusa impilo yomzimba kunye nengqondo. Zonke ezi mvakalelo ziyonyuswa ukuba zenziwe neqabane lakho.
Unokuziva ukhethekile ngokuzonwabela isidlo sakusasa xa ulele. Xa ibhedi ingeyoyakho kwaye awunakucoca emva koko, ungonwabela isidlo sakusasa ebhedini ngaphandle kokuzisola. Kufuneka ucinge nje ngokuqala kosuku lweholide ngaphandle kokuba naluphi na uxanduva ecaleni kweqabane lakho kwaye nonwabele isidlo sakusasa esimnandi ongakhange ubusilungiselele. Isidlo sakusasa singenziwa ngeendlela ezahlukeneyo zokutya ukukhuthaza ukuba ibe yinto ekhethekileyo. Ungayi kwisidlo sakusasa esiqhelekileyo.
Indawo yokuqhawula ngale ndlela ihlala ihotele inikezelwe kwizibini ezitshatileyo kwaye zihlala zithandana ngakumbi. Ezi hotele zisetyenziselwa izibini ezenza izicwangciso ezahlukeneyo zihlala zinemisebenzi emininzi yokwenza. Eminye imizekelo yile Iibhafu ze-whirlpool okanye i-jacuzzi egumbini. Oko sikukhankanyileyo ngaphambi kwesidlo sakusasa kwigumbi lakho kunokuba ngumbono omuhle.
Ezo hotele zine-spa zisetyenziselwa ukonwabela iseshoni ye-thermal, isibini esitshatileyo okanye unyango lobuso nolomzimba. Ngesidlo sokugqibela sokuthandana newayini elungileyo, usuku luya kugqitywa. Iinkcukacha ezinokukunceda, nokuba iyinto ebiza kakhulu, Kucelwa ukuba uphume kwigumbi emva kwexesha kwaye hayi nge-12. Kungenzeka ukuba amaphepha ancamathele kuwe kwaye ufuna ukonwabela neqabane lakho ixesha elide ngaphandle kokungxama.
Unokukhetha phakathi kweendawo ezahlukeneyo zabakhenkethi ngokuxhomekeke kukuthanda kwesibini. Unokukhetha ukukhetha ezo ndawo apho kukho into enokonwaba ngakumbi. Umzekelo, Unokwenza i-kayaking, i-bungee jumping, ukunyuka, i-zip line, njl. Ezi zicwangciso zenzelwe ezo zibini zineesile ezingenakuphumla. Unokuyonwabela imbonakalo elungileyo kubuhle beelwandle kunye neentaba. Kulapho kufuneka unike umbono wakho.
Enye into ebalulekileyo ekufuneka ithathelwe ingqalelo lixesha lonyaka. Ukuba yiKrisimesi, kungcono ukufumana indawo apho iKrisimesi ibhiyozelwa ngesitayile. Kuya kufuneka ujonge iminyhadala ekhethekileyo ukuze ukwazi ukwenza imisebenzi eyahlukileyo engalibalekiyo. Yile mi sebenzi eya kusinceda sikhumbule ukubaleka kwethu kwezothando njengento engenakoyiswa.
Ungalibali ukuba izicwangciso kufuneka zikhetheke kuba ingumnyhadala owahlukileyo. Kuncinci kakhulu ukwaphula intloko kakhulu ukusukela Inyaniso elula yokwenza into eyahlukileyo kwaye ikhethekileyo kunye neqabane lakho sele iyinxalenye yokubaleka kwezothando kwaye kuyakuxhomekeka kuthi ukuba oluhambo alulibaleki.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi luyakunceda ucwangcise ukubaleka kwezothando.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Isibini kunye nokwabelana ngesondo » Ukubaleka kwezothando
Amadoda: njani ukuba neenwele ezinde